Maxaa Sabab u Ah Shidaal Yaridda Nayjeeriya? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Xaggeed Ka Heli Kartaa Buugga NABSI?
Afrikaan.so, August 30, 2017
Cabdijabaar Sh. Axmed — August 5, 2015
Dalka Nayjeeriya ayaa waxaa maalmahaanba ka taaganeyd shidaal yari baahsan, taasi oo sababtay in ay hoos u dhacaan howlihii ganacsi ee dalkaasi. Nayjeeriya waa dal ka mid ah qaaradda Afrika. Wuxuuna ku yaallaa galbeedka Afrika, wuxuu xaduudo la leeyahay Benin oo ka xigga xaga galbeedka, Chat iyo Kamaroon waxay ka xigaan bari, waqooyiga waxaa ka xigga Niger.
Waa dalka ugu dadka iyo qeyraadka badan qaaradda Afrika, waana dalka ugu soo saarka badan shidaalka qaarada Afrika. Waxaay soo saaraan maalin walbo 2 milyuun barmiil oo shidaal cayriin ah. Shidaalka lagu soo saaro wadanka Nayjeeriya ayaa ah shidaal sidooda lagu iibiyo, maxaa yeelay waxaan jirin wixii lagu safeyni lahaa shidaalkaas.
Hase ahaatee waxaa maalmahaan dambe soo baxaayo shidaal yaridda ku timaaday gobolka. Waxaa ka howl gala shirkado badan oo ay ka mid yihiin Batroolka qaranka Nayjeeriya (Nigerian national petroleum), Shell, saliidda iyo gaaska Nayjeeriyaanka (Nigerian oil and gas) iyo MRS Oil Nigeria Plc. Shirkadaha shidaal oo ka howl gala wadankaan ayaa sheegaayo inay dowladda ku leeyihiin lacag gaarayso 2 bilyan oo doolarka Mareenka ah.
Waxaana wadanka ka jiro dhibaatooyin badan oo ku saabsan xagga dowlad xumo iyo kalsooni la’aanta ka dhaxeyso dowladda iyo bulshada rayidka. Wadankaan asigoo ah wadanka ugu shidaalka badan ee qaarada Afrika ayaa dadkiisa qaar yihiin kuw ku liito nolol maalmeedkooda. Waxaana sawab u ah dhibaatooyinkaas oo dhan maamul la’aanta qayraadka wadanka.
Maamul daridaas xitaa waxay sababtay in shirkadaha ka howlgala wadanka gudihiisa ay sheeganayaan dhibaato badan oo ku aadan xagga shidaalka. Waxaana laga filanayaa in kuwa badan ay joojini doonaan shaqooyinka ay ka wadeen gudaha wadankaas.
Waxaa la hakiyay qaar ka mid ah duulimaadyadii dalkaasi tegi lahaa ama ka bixi lahaa, sidoo kalle mid ka mid ah bangiyada ugu waa weyn dalkaasi Nayjeeriya ayaa waxa uu yareeyay saacadaha uu shaqeeyo, halka shirkadda taleefanada ee MTN ay ka digtay in ay damin doonto qalabkeeda shidaal la’aan awadeed.
Dhibaatadaan iyo kuwa kalle oo lamid ah ayaa caalamka intiisa badan ka dhaco balse waxaad u moodaa in wadamo badan ay ka soo kabsanayaan dhibaatooyinka noocaan oo kalle balse Afrika waxad u malaysaa inuu ku dambeeyo maamul xumada iyo daryeel la’aanta bulshada ay maamulka u haayaan. Haddii aan kuweydiiyo su’aal aqristoow maxaad ka barani kartaan xaaladaan ka taagan dalka Nayjeeriya? Maxay tahay waxyaabaha ugu balaaran oo aad ka baratay dhibaatada soo foodsaartay dalkaan Nayjeeriya? Sidda aan wada ognahay madaxda Afrika waa kuwa ugu hantida iyo kursiga jacel. Haddii la bilaabo in shidaal laga soo saaro dhulka Soomaalida maxay kulla tahay in loo baahanyahay in la qabto marka horre? Maamul heer intee la eg ayaa loo baahanyahay?
Next post Sigaarka Oo Dhibaato U Geysta Maskaxda
Previous post Sidee Lagu Joojini Karaa Cunista Qaadka?